MM Online Shopping announcement – MM Online Shopping
2020-03-30 2020-03-30 Cherry Mask
MM Online Shopping မှာ ပို့ဆောင်မူများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြေငြာချက်
ဧရာဝတီတိုင်းကို ဒီနေ့နောက်ဆုံးပို့ပေးပါမယ် မနက်ဖြန်ကစပြီး မပို့ပေးတော့ပါ ပုသိမ်ကတော့ ပို့ပေးလို့ရပါတယ် .
ရန်ကုန်မြို့တွင်းး Order များကို ယခင် ဒီနေ့မှာ မနက်ဖြန်အစား ..
ဒီနေ့၃နာရီမတိုင်ခင် မှာယူသော cu များ မနက်ဖြန်ရပါမယ်
၃နာရီကျော်ပါက ကျွန်တော်တို့က နောက်နေ့မှာ delivery service ကိုအပ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် သဘက်ခါမှာပို့ပေးပါမည် ..(တချို့ ကန့်သတ် မြို့များကတော့ နည်းနည်းစောင့်ရပါမည် ဥပမာ မင်္ဂလာဒုံ၊ သန်လျှင်)
မှတ်ချက် လာပို့မည်နေ့ မနက် ၉ခွဲကနေ ၁၁ခွဲအတွင်း cu တွေ့ဆီကို delivery company က ဖုန်းဆက်ပေးပါတယ် အဲဒီအတောအတွင်းဖုန်းအဆက်အသွယ်မရပါက နောက့်နေမှပို့ပေးပါတယ်ထို့နောက် ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီအချိန်အတောအတွင်း ဖုန်း missed call များတွေ့ပါက ပြန်လည်ခေါ်ဆိုပေးစေချင်ပါတယ် .
လာယူသမားများ မနက် ၉နာရီကနေ ည ၈နာရီအထိ လာယူလို့ရပါတယ် ..
ကျွန်တော်တို့ online shopping သညိ 8.4.20 တွင် ခေတ္တာရပ်နားပါမည်
အားလုံးပဲ Covide 19 ကြောင့် စိတ်သောကေ၇ာက်နေရတာအားလုံး ပျောက်ကင်းပြီး ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီး မြန်မြန် ပျောက်ကင်းပါစေခင်ဗျာ ..
MM Online Shopping မှာ ပို့ဆောငျမူမြားနှငျ့ ပတျသကျပွီး ကွငွောခကျြ
ဧရာဝတီတိုငျးကို ဒီနနေ့ောကျဆုံးပို့ပေးပါမယျ မနကျဖွနျကစပွီး မပို့ပေးတော့ပါ ပုသိမျကတော့ ပို့ပေးလို့ရပါတယျ .
ရနျကုနျမွို့တှငျးး Order မြားကို ယခငျ ဒီနမှေ့ာ မနကျဖွနျအစား ..
ဒီနေ့၃နာရီမတိုငျခငျ မှာယူသော cu မြား မနကျဖွနျရပါမယျ
၃နာရီကြျောပါက ကြှနျတျောတို့က နောကျနမှေ့ာ delivery service ကိုအပျပေးရတာဖွဈတဲ့အတှကျ သဘကျခါမှာပို့ပေးပါမညျ ..(တခြို့ ကနျ့သတျ မွို့မြားကတော့ နညျးနညျးစောငျ့ရပါမညျ ဥပမာ မင်ျဂလာဒုံ၊ သနျလြှငျ)
မှတျခကျြ လာပို့မညျနေ့ မနကျ ၉ခှဲကနေ ၁၁ခှဲအတှငျး cu တှဆေီ့ကို delivery company က ဖုနျးဆကျပေးပါတယျ အဲဒီအတောအတှငျးဖုနျးအဆကျအသှယျမရပါက နောကျ့နမှေပို့ပေးပါတယျထို့နောကျ ကြေးဇူးပွုပွီး အဲဒီအခြိနျအတောအတှငျး ဖုနျး missed call မြားတှပေ့ါက ပွနျလညျချေါဆိုပေးစခေငျြပါတယျ .
လာယူသမားမြား မနကျ ၉နာရီကနေ ည ၈နာရီအထိ လာယူလို့ရပါတယျ ..
ကြှနျတျောတို့ online shopping သညိ 8.4.20 တှငျ ခတ်ေတာရပျနားပါမညျ
အားလုံးပဲ Covide 19 ကွောငျ့ စိတျသောကရောကျနရေတာအားလုံး ပြောကျကငျးပွီး ဒီကပျရောဂါဆိုးကွီး မွနျမွနျ ပြောကျကငျးပါစခေငျဗြာ ..
Jan 27 ကနေ 30 အထိ MM အဖွဲ့သားများ ခရီးထွက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဆိုင်ခေတ္တပိတ်ပါမည်
page ပေါ်က စာများကိုတော့.. ပြန်ဖြေပေးပါမယ် ဒါပေမယ် reply နည်းနည်းကြာနိုင်ပါတယ် .. နယ် order များ.. ၂၇ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ခွဲနောက်ဆုံးထားငွေလွဲပေးပါခင်ဗျာ ..အဲဒီနေ့ တခါတည်း ကားဂိတ်ကိုအပ်ပေးပါမယ် .. လာယူသမားများလည်း လာယူလို့မရပါ.. order များကို...
2019 ကုန်ခဲပြီး MM ကဘာတွေ့ပြောင်းလဲခဲလဲ 2019 ဖေဖော်ဝါရီ ၀န်းကျင်လောက်က ပစ္စည်းများတွေ့များလာလို့ MM ကနေရာတနေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ် ... ၀န်ထမ်း ၁ယောက်တိုးလာတယ် page က စုစုပေါင်း ၆ခုဖြစ်ခဲ့တယ် . .. ဒီနောက်ပိုင်း ဘာတွေ့အားနည်းလာတာလဲဆိုတော့...